मखमली प्रेम - जीवनशैली - नेपाल
गीत गाउँदा जवानी फर्किएको अनुभव हुन्छ प्रेमध्वजलाई । ‘सफ्ट मेलोडी’ अर्थात् मखमली स्वरका लागि चिनिएका प्रेमध्वज झन् झन् फुर्तिला हुन पुग्छन् ।
सदाबहार गायक भन्ने ‘टाइटल’ सोह्रैआना सुहाउँछ, प्रेमध्वज प्रधान, ८१, लाई । साढे ६ दशकदेखिको चिरपरिचित आवाज अहिले पनि नयाँ एल्बमको तयारीमा छ । आठवटै गीतको कम्पोज आफैँले गरेका उनलाई ‘जीवन फूल हो कि भूल ?’को मिक्सिङ र मास्टर्सले व्यस्त बनाएको छ ।
गीत गाउँदा जवानी फर्किएको अनुभव हुन्छ प्रेमध्वजलाई । ‘सफ्ट मेलोडी’ अर्थात् मखमली स्वरका लागि चिनिएका प्रेमध्वज झन् झन् फुर्तिला हुन पुग्छन् । नेपाली सुगम संगीतमा उनको स्थान तलत महमुद, मेहदी हसनको हाराहारीमा छ ।
आफ्नो जमानाका यी स्टाइलिस गायकको पुख्र्यौली थलो सिन्धुपाल्चोकको चौतारा हो । काठमाडौँमा घर नभएकालाई छोरी नदिने भएकाले उनका जमिनदार बाजे उत्तरध्वजले बांगेमुढाको नघल: टोलमा घर किनेका रहेछन् राणाकालमा । उनका जिजुबाजे नारायणकृष्ण र बाजे शास्त्रीय संगीतका सोखिन थिए भने बाबु र आमा दुवै कलाकार ।
त्यतिबेलासम्म रेडियो नेपालमा सबथोक प्रत्यक्ष प्रसारण मात्रै हुन्थ्यो । देश दुनियाँ आफ्नो स्वरमा लठ्ठिसक्दा पनि प्रेमध्वजले आफ्नै गीत सुन्न पाएका थिएनन् । ०१२ मा आएर अमेरिकी दूतावासले पुरानो रेकर्डिङ मेसिन दियो । त्यसको दुई वर्षपछि तारादेवीसँग उनको पहिलो गीत रेकर्ड भयो, ‘यो नेपाली शिर उचाली...’, भूपी शेरचनको शब्द र नातिकाजीको संगीतमा ।
आफ्नै देशमा, आफ्नै रेडियोमा, आफ्नै स्वर सुन्न पाउनु अहोभाग्य सम्झन्छन् प्रेमध्वज । प्रौढ शिक्षा निकेतन (नाइट स्कुल)बाट ०१० को एसएलसीमा फेल भए उनी । संस्कृतमा उत्तीर्णांक १६ थियो, उनको आठ अंक पुगेन । दुई वर्षजति भारततिर भौँतारिएर पद्मोदय स्कुुलमा भर्ना भए र एसएलसी गरे । बाबुको इच्छा थियो इन्जिनियर बनाउने । त्रि–चन्द्रमा आईएस्सी पढेका पनि हुन् । तर, हैजाका कारण परीक्षा छुटेपछि सरस्वती कलेजबाट आईए र बीए गरे ।
अलिकति पैसा जम्मा भएपछि मुम्बई गए ०१८ मा । लङ लेइङ डिस्कमा चारवटा गीत रेकर्ड गराए । एउटा गीतको खर्च दुई सय भारु लाग्थ्यो । त्यतिबेलाकै गीत हुन्, ‘गोरेटो त्यो गाउँको...,’ ‘माया नमार मायालु.... ।’ बर्सेनि पैसा भयो कि मुम्बई पुगिहाल्थे प्रेमध्वज । हरेकचोटि चार–चारवटा गीत रेकर्ड गराउँथे । पछि गएर रत्न रेकर्डिङ संस्थानले उनका १२ वटा गीत नि:शुल्क रेकर्ड गरिदियो । त्यसबेला उनले जे गायो, त्यो हिट भइहाल्थ्यो । राष्ट्रिय गीत, नेवारी गीत होस् या भजन । रेडियो नेपालमा ३ सय ४० वटा आधुनिक गीत रेकर्ड गराएछन् प्रेमध्वजले । तर, पछि त्यहाँ जाँदा ५६ वटाभन्दा बढी भेटेनन् उनले ।
नेपाल भाषाको ‘बाला बाला चिंगु मिखा:’ रक एन्ड रोल स्टाइलमा गाएका थिए प्रेमध्वजले । ‘राजमती कुमती’ उनको ‘सिग्नेचर’ गीत हो । प्रेमध्वजले आमाकै संगीतमा चारवटा भजन गाएका छन् । त्यतिबेला सेलिब्रिटी गायक तीन जना मात्रै थिए, बच्चुकैलाश, नारायण गोपाल र प्रेमध्वज । तिनका आवाजमा सुगम संगीतको बास्ना थियो । “हामीबीच त्यस्तो कुनै प्रतिद्वन्द्विता थिएन,” उनी भन्छन्, “थियो भने उसले गीत रेकर्ड गर्‍यो, म पनि गर्छु वा उसले राम्रो गायो, म पनि राम्रो गाउँछु भन्ने सकारात्मक भावना मात्रै ।”
०२३ मा माइतीघर सिनेमाको सुटिङका लागि संगीतकार जयदेव र हिरोइन माला सिन्हा आएको हल्ला सुने उनले । तिनताका प्रेमध्वज, नारायण गोपाल र भूपी शेरचनको भेटघाटको थलो थियो, धर्मपथको पारस होटल (अहिले पिनट्स भएको ठाउँ) । माइतीघरमा गीत गाउनका लागि नाम लेखाए उनले । एक दिन डेपुटी प्रोडक्सन म्यानेजर किशोर तिमिल्सिनाले भने, ‘गीत रेकर्डका लागि तिमीलाई नै लैजाने भयौँ ।’
अनि के थियो र ? अफिसबाट एकमहिने छुट्टी लिएर मुम्बई हानिए प्रेमध्वज । उनलाई आशा भोसलेसँग पाश्र्व स्वर दिने भनिएको थियो, गाए उनकै बहिनी उषा मंगेशकरसँग । बोल थियो, ‘नमान लाज यस्तरी... ।’ निजी क्षेत्रबाट बनेको पहिलो सिनेमा थियो त्यो । १५ वटा गीत थिए फिल्ममा । फिल्मकी नायिका माला सिन्हा मखमली आवाजका धनी प्रेमध्वजलाई खुब मन पराउँथिन् र सुटिङको चार्टर्ड प्लेनमा सँगै पोखरा पनि लगिन् । फेवातालको डुंगामा बसेर सँगै गीत पनि गाइन् ।
मुम्बईको महानगरीय जीवन हेर्ने रहर नभएको होइन, प्रेमध्वजलाई । मुम्बई त्यस्तो मायानगरी थियो, नायक बन्न गएका गायक बन्थे, गायक बन्न गएका नायक । आखिर प्रेमध्वज भारतीय विद्याभवनमा संगीत सिक्ने मनसुवाले एक वर्ष बेतलबी बिदा लिएर गए पनि । उनलाई सुनेपछि प्रशिक्षकहरूले ‘तिमीले संगीत सिक्न आवश्यक छैन’ भनेर फर्काइदिए । मालाको अनुरोधमा सत्यकामना फिल्म फेयर अवार्डमा पनि गाए उनले । ‘तुमबिन जाऊँ कहाँ...’ गाउँदा ‘वान्स मोर’ त कति हो कति !
त्यतिबेला मनोहरिले १० घन्टा लगाएर उनका १० वटा गीत रेकर्ड गराइदिए । ‘घुम्तीमा नआऊ है...,’ ‘टाढा टाढा भैगयो फेरि...’ ‘तारा मात्र होइन तिमीलाई...’ आदि । त्यतिबेला युरोपेली पोलिडर कम्पनीबाट निकालिएको आफ्नै एल्बम हिमालयन ब्याङ्क्वेट फ्रम सिङ्गिङ् काठमान्डू अमेरिकामा भेटेर कान्छा छोरा कविरले ल्याइदिँदा छक्क परे प्रेमध्वज ।
एक महिना फरकका बाबु–आमाबीच डिभोर्स भएकाले उनले धेरै कान्छी किरणलाई रोजेका रहेछन् । दुई छोरा भए, प्रसन्नध्वज र कविरध्वज । अमेरिकामा बसोवास गरिरहेका सफ्टवेयर इन्जिनियर प्रसन्नध्वज पनि गायक हुन् । उनका दुइटा एल्बम छन्, प्रसन्न र इनर्जी । छोराका लागि उनले ‘घुम्तीमा नआऊ है’ र ‘गोरेटो त्यो गाउँको...’ गीतकार रत्नशमशेर थापालाई चार गीत लेखाएछन् । कान्छा छोरा अमेरिकी लिग खेलिसकेका फुटबलर हुन् । प्रेमध्वजले अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागिसकेका छन् भने छोरालाई अमेरिकी नागरिकता लिन दिएका छैनन् ।
पोहोर साल प्रेमध्वजको खुट्टा लरबरिएको देखिछन् भान्जी भुवन मास्केले । फोटो खिचेर अमेरिका पठाइछन् । छोराहरूको जोडबलमा जाँच्दा मगजबाहिर पानी जम्ने रोग हेमाटोमा भएको पत्ता लाग्यो । भित्ता वा ढोकामा टाउको धेरैपटक ठोक्किएमा यस्तो रोग लाग्दो रहेछ । लामो उपचार र ‘बेडरेस्ट’ पछि उनी फेरि संगीतमै जुर्मराएका छन् । र, गोल्डेन भ्वाइसमा गुनगुनाउँदै छन्, ‘जीवन फूल हो कि यो भूल हो ?’